एक नयाँ हार्ट, भगवान स्विट्जरल्याण्ड (WKG) को विश्वव्यापी चर्च
यस अचम्मको कथाले मलाई मेरो आफ्नै हृदय प्रत्यारोपणको सम्झना गरायो। यद्यपि मैले "शारीरिक हृदय प्रत्यारोपण" गरेको छैन, तर हामी सबै जो ख्रीष्टलाई पछ्याउँछौं, तिनीहरूले यस प्रक्रियाको आध्यात्मिक संस्करण अनुभव गरेका छौं। हाम्रो पापी स्वभावको क्रूर वास्तविकता यो हो कि यो केवल आत्मिक मृत्युमा अन्त्य हुन सक्छ। भविष्यवक्ता यर्मियाले यस कुरालाई स्पष्टसँग भनेका छन्: «मुटु विद्रोही र हताश चीज हो; यसलाई कसले बुझ्न सक्छ? » (यर्मिया २:17,9:२)
हाम्रो "हृदयको आध्यात्मिक अवस्था" को वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै, आशा पाउन गाह्रो हुन सक्छ। हाम्रो आफ्नै मा, बाँच्न को संभावना शून्य छ। अचम्मको कुरा, येशूले हामीलाई आत्मिक जीवनको सम्भावित मात्र अवसर प्रदान गर्नुभयो।
«म तपाईंभित्र एउटा नयाँ हृदय र नयाँ आत्मा दिन चाहन्छु र म यो ढु of्गाको मुटु तपाईंको शरीरबाट हटाउन चाहन्छु र तपाईंलाई शरीरले भरी हृदय दिन्छु» (इजकिएल १:36,26:१)।
मुटु ट्रान्सप्लान्ट? प्रश्न सधैं उठ्छ: कसले आफ्नो मुटु दान गर्छ? नयाँ हृदय जुन परमेश्वरले हामीमा रोप्न चाहानुहुन्छ, दुर्घटनाको सिकारबाट आएको होइन। यो उनको छोरा येशू ख्रीष्टको हृदय हो। प्रेरित पावलले ख्रीष्टको यो स्वेच्छाले दिइएको उपहारलाई हाम्रो मानव स्वभावको नवीकरण, हाम्रो आत्माको परिवर्तन र हाम्रो इच्छाको मुक्ति भनेर वर्णन गर्दछन्। यो सबै समावेशी रिडेम्प्शनले हामीलाई हाम्रो पुरानो, मृत मुटुलाई यसको नयाँ, स्वस्थ हृदयको लागि आदान प्रदान गर्ने अद्भुत अवसर दिन्छ। उसको प्रेम र अनन्त जीवनले भरिएको हृदय। पावलले वर्णन गरे: «हामीलाई थाहा छ हाम्रो बुढो मानिस उहाँसँगै क्रूसमा टाँगिएको थियो ताकि पापको शरीरलाई नाश गरियोस् र हामी पापको दास हुने थिएनौं। जो मर्दछ ऊ पापबाट स्वतन्त्र भएको छ। तर यदि हामी ख्रीष्टसँगै मरेका छौं भने, हामी जान्दछौं कि हामी पनि उहाँसँगै बाँच्ने छौं। (रोमी .6,6.२8-२XNUMX)
परमेश्वर येशूमा एक अद्भुत आदानप्रदान भएको छ ताकि तपाईं उहाँमा नयाँ जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ, उहाँसँग स fellow्गति राख्न सक्नुहुन्छ र पवित्र आत्मामा पिताको साथमा भाग लिन सक्नुहुन्छ।
भगवान तपाईंको नयाँ मुटु रोप्नुहुन्छ र तपाईं आफ्नो छोराको अर्को, नयाँ आत्मा संग सास। तपाईंसँग केवल मुक्तिदाता र उद्धारक येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र कृपामार्फत जीवन छ!